Trump oo bilaabay inuu ka aargoosto raggii ka tirsanaa maamulkiisa oo ku markhaati… – Hagaag.com
Trump oo bilaabay inuu ka aargoosto raggii ka tirsanaa maamulkiisa oo ku markhaati…
Posted on 8 Febraayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay in uu shaqooyinka ka eryo xubnihii ku markhaati furay kiiskiisa maxkamadda ee xil-ka-xayuubinta kaas oo wax dambi ah lagu waayay maalmo ka hor, aqalka sarena uu laalay dacwaddiisa.
Seefta aargudashada ayaa saameysay laba xubnood oo kala hayay labo jago oo muhiim ah kuwaas oo kala ah Alexander Vindman iyo Gordon Sondland.
Alexander Vindman ayaa ahaa la-taliye ku takhasusay arrimaha Ukraine, waxaana uu xafiis ku lahaa Aqalka cad oo shalay laga soo saaray xafiiskiisa.
Sidoo kale walaalkiis la mataano ah oo isna ka shaqeynayay aqalka cad ayaa sidoo kale uu galaaftay Alexander Vindman.
Saacado kadib markii lataliyaha shaqada laga eryay ayaa waxaa sidoo kale soo baxay warar sheegayay in isna shaqada laga eryay Gordon Sondland oo ahaa safiirka Mareykanka u fadhiyay Midowga Yurub.
” – Waxaa la igu soo wargeliyay in madaxweynuhu doonayo in aan jagada u banneeyo sida ugu dhakhsiyaha badan. Waana ka mahadcelinayaa in aan helay fursadda aan ugu adeegay qaranka ee la i siiyay”, sidaasi waxaa warbaahinta ku yiri safiir Gordon Sondland.
Vindman iyo Sondland ayaa sano hore maxkamadda uga markhaati furay madaxweyne Trump, waxaana xilligaasi uu sheegay Trump in uu ka aargudan doono dhammaan dadka ku lugta leh in maxkamad lagu furo.
Hanjabaaddaasi ayuu madaxweyne Trump kaga dhabeeyay kaddib markii uu ka farxashay kiiska xil-ka-xayuubintiisa oo loo cuskaday in uu ku tagri-falay awooddiisa madaxweyne iyo in uu dano gaar ah u adeegsaday.